Nanala ny ampahany tamin’ny fanapahana ny fifandraisana ao Kashmir i India, mbola tapaka kosa ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nizaka fatiantoka iray miliara dolara ny toekarena tanatin'ny roa volana
Voadika ny 24 Oktobra 2019 9:42 GMT
Polisy Indiana mitsangana eo akaikin'ny lalana ao afovoan-tanànan'i Srinagar, renivohitr'i Kashmir rehefa asara. 11 Septambra 2016. Sary tao amin'ny Instagram avy amin'i Ieshan Wani. Nahazoana alàlana.
Nanala ny ampahany amin'ny fidirana amin'ny tambajotram-pifandraisana ao Kashmir ny manampahefana Indiana. Mbola tapaka na izany aza ny fidirana amin'ny aterineto.
Tamin'ny 5 aogositra, nihidy tanteraka i Srinagar, tanàndehibe ao Jammu sy Kashmir, rehefa nanafoana ny andininy faha-370 amin'ny lalàmpanorenana Indiana ny governemantan'i India, lalàna izay manome fizakantena manokana nanomboka tamin'ny taona 1950 ho an'ny fanjakan'i Jammu sy Kashmir ifandroritana. Naato ny fidirana amin'ny tambajotra finday, telefonina sy ny aterineto ary napetraka teny amin'ny arabe ny sakan-dalana ary napetraka koa ny famerana saika ny hetsika rehetra.
Nampihena ny famerana miandalana ny manampahefana. Naverin'izy ireo aloha ny fifandraisana an-tariby 50.000 tao amin'ny faritra nanomboka herinandro voalohany amin'ny volana septambra. Tamin'ny 14 Oktobra, 72 andro taorian'ny fanakatonana, naverin'ny manampahefana ny tolotra SMS sy ny antso ho an'ny famandrihana finday aloa vola aoriana (postpayé). Na izany aza, mbola miato ny fifandraisana finday aloa vola mialoha sy ny tolotra aterineto. Milaza ny Telegraph India, fa eo amin'ny 400.000 eo ho eo ny fifandraisana an-tariby andoavam-bola aoriana ary 260.000 ny fifandraisana andoavam-bola mialoha ao amin'ny faritra. Tsy nanome fanazavana momba ny antony namerenany ny fidirana amin'ny tolotra SMS sy antso ho an'ny famandrihana andoavam-bola aoriana ny governemanta. Na izany aza, izany fanapahan-kevitra izany dia azo hazavaina amin'ny hoe sarotra ny manaradia sy manara-maso ireo mpampiasa ny famandrihana andoavam-bola mialoha satria tsy mitovy amin'ireo mpampiasa ny famandrihana mandoa vola aoriana, tsy takiana handefa tahiry manokana izay manamora ny famantaran'ny manampahefana azy ireo izy ireo, toy ny antsipirian'ny banky sy ny adiresy mailaka.
Nanambara i Satya Pal Malik, governoran'i Jammu sy Kashmir fa “ara-dalàna ny toe-javatra satria tsy nisy herisetra hatramin'ny roa volana”. Niaro ny fanakatonana ny minisitra, nilaza fa fepetra hiarovana ny “fiarovana an'i Kashmira” izany ary nilaza fa “haverina tsy ho ela” ny fahazoana miditra amin'ny aterineto, tsy nilaza hoe rahoviana.
Vakio bebe kokoa: Ao anatin'ny krizin'i Kashmir
Naato vetivety ny tolotra SMS
Na eo aza ny fihenan'ny fameperana, dia tsy ela dia nanakorontana ny fidirana amin'ny tolotra SMS ho an'ireo famandrihana aloa vola aoriana (postpayés) ny manam-pahefana ..
Nandritra ny alin'ny 15 oktobra, nisy nanakorontana ny tolotra fandefasan-kafatra tao Jammu sy Kashmir rehefa nisy mpamily kamiao iray novonoin'ireo ahiana ho mpikomy nitam-piadiana izay avy eo nandoro ilay kamiao. Naverina ora vitsivitsy taty aoriana avy eo ny tolotra.
Nilaza i Brahma Chellaney, mpampianatra momba ny fandinihana stratejika ao amin'ny Foiben'ny Fikarohana Politika any Delhi fa natao ny famerana ny fifandraisana amin'ny finday mba hamerana ny hetsik'ireo mpitolona, izay mazàna mandrindra fanafihana amin'ny telefonina. Na izany aza, ny Kashmirita no mizaka ny vokany satria najanona ara-bakiteny ny orinasan'ny fizahantany izay miankina amin'ny aterineto. Manohintohina ny zon'ny Kashmirita haneho hevitra sy hiditra amin'ny vaovao an-tserasera ihany koa ny famerana ary manakana azy ireo tsy hifandray sy hizara amin'izao tontolo izao mikasika ny zava-mitranga eny ifotony..
Araka ny filazan'ny Internetshutdowns.in, fanakatonana 55 no nampidirina tao jammu sy Kashmir tamin'ny taona 2019. Ny fanakatonana lava indrindra dia tao Jammu sy Kashmir tamin'ny taona 2016 raha naato nandritra ny 133 andro ny tolotra aterineto finday.
Fihetsiketsehana mangina ao Kashmir
Vakio bebe kokoa: Tahaka ny “fonja ankalamanjana” i Kashmir, hoy ireo mpanara-baovao
Nitsidika an'i Kashmir tamin'ny 5 ka hatramin'ny 9 Oktobra 2019 ilay mpisolovava ao amin'ny Fitsarana Tampony Indianina, Nitya Ramakrishnan, sy Nandini Sundar, mpampianatra sôsiôlôjia ao amin'ny Sekolin'ny Toe-karena any Delhi. Nilaza tamin'ny tatitra izy ireo taorian'ny fitsidihan'izy ireo fa manohitra ny hetsika napetraky ny governemanta Foibe Indiana ny Kashmirita tamin'ny alàlan'ny satyagraha na tsy fankatoavana sivily tsy misy herisetra”. Nampian'izy ireo ihany koa fa mihitsoka ny fitantanana manontolo – manomboka amin'ny antoko politika mahazatra hatramin'ny mpitarika separatista – an-tsitrapo tanteraka ny tsy fankatoavana. Samy nanambara izy ireo fa “saika ny olona rehetra no maniry azadi na fahalalahana”.
Nilaza ny governemanta Indiana fa nesorina tao amin'ny ankamaroan'i Kashmir ny famerana ny fahalalahana hanao hetsika, ankoatra ireo faritra vitsivitsy ary nesorina koa ny famerana ny fitsidihan'ireo mpizaha tany. Nilaza ihany koa ny mpitondra tenin'ny governemantam-panjakana Rohit Kansal fa hisokatra any amin'ny “toerana fizahan-tany” ny fotodrafitrasa aterineto..
Tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny India Today, nilaza ny minisitry ny Atitany Indiana, Amit Shah fa “milamina” ny raharaha ary “miverina amin'ny laoniny” ny ao Jammu sy Kashmir.
Na izany aza, tamin'ny 15 Oktobra 2019, nisambotra vehivavy 13 noho ny fihetsiketsehana fanoherana an'i India tao amin'ny zaridainan'i Srinagar, renivohitr'i Jammu sy Kashmir ny manampahefana. Nilanja sora-baventy mivaky hoe “Hajao ny Zo Fototra” sy “Nahoana no mampihen-danja an'i Jammu sy Kashmir” izy ireo.
Nosamborina ireo andiana vehivavy malaza tao Srinigar, anisan'izany @hawa_khan1, izay nanohitra tamim-pilaminana ny fanapahan-kevitr'i India hanafoana ny fizakantenan'i Kashmir sy ny herisetra ao.
Mametraka ohatra i India. Te-hanampim-bava ny tsy fitovian-kevitra rehetra ao Kashmir izy ireo.
Nosamborina androany i Ruqayya Sayeed, nenitoako 80 taona, ary napetraka tao amin'ny Fonja Foibe ao Srinagar niaraka tamin'ny mpikatroka vehivavy maromaro noho ny fihetsiketsehana am-pilaminana manohitra ny fanakanana ny fifandraisana ao #Kashmir
Nogadraina tao amin'ny “Kashmir ara-dalàna” ireo vehivavy ireo Tsy manam-pahataperana ny lalaon'ny governemanta ao Kashmir
Tamin'ny 3 Oktobra, nanao fihetsiketsehana mangina tao Srinagar ny mpanao gazety avy ao amin'ny Lohasahan'i Kashmir mba hanohitra ny fanakanana ny fifandraisana.
Androany, izahay mpanao gazety ao #Kashmir dia tsy maintsy manohitra ny fanakanana ny serasera, izay efa naharitra roa volana izay. Tsy asa mora ny maha mpanao gazety miasa ao Kashmir amin'izao fotoana izao – tsy misy telefonina, aterineto na fifandraisana hafa
Mandritra izany fotoana izany dia nisy ny fihetsiketsehana mitsitapitapy izay natao manerana an'i India ho fanoherana ny famoretana :
Mpianatra ao amin'ny #AligarhMuslimUniversity nikarakara fihetsiketsehana mangina hanoherana ny famoretana ao #Kashmir.
Dona mafy ho an'ny toekarena
Milaza ny tatitra vao haingana navoakan'ny BBC mikasika ny filazan'ny manampahaizana momba ny indostria fa nitondra fatiantoka 1 miliara dolara mahery tamin'ny toekarena ny fanakatonana tao Kashmir tantanin'i India nandritra ny 2 volana. Mandra-pisian'ny fanakatonana, iray amin'ireo loharanom-bola goavana miditra ho an'i Kashmir, manohana olona 700.000 ny fizahan-tany. Naato nandritra io vanim-potoana io ity indostiria ity. Trano fandraisam-bahiny telo arivo ao amin'ny lohasaha no foana, miteraka fandaniana isan'andro sy fandoavana ny karaman'ny mpiasa tsy voaloa. Mpiasa an-tsitrapo 400.000 eo ho eo no niala hatramin'ny nanombohan'ny fanakatonana ka niteraka tsy fahampian'ny asa. Sampan-draharaha mpikarakara fitsidihana dimy arivo no manana olana amin'ny fikarakarana fitsangatsanganana na dia efa nofoanana aza ny fandraràna ny fizahan-tany satria mbola tsy misy aterineto. Naato ny ankamaroan'ny asa amin'ny indostirian'ny asa tanana sy ny indostirian'ny voankazo noho ny famerana ny fifandraisana.
Manomboka amin'ny asa tanana hatramin'ny fizahantany, ny voankazo ary ny varotra ambongadiny sy ny orinasa madinika, nitondra fatiantoka maherin'ny 1 miliara dolara tao anatin'ny roa volana ny fanakatonana tao #Kashmir.
Tsy lazaina intsony ny ratra an-tsaina, ny fahaketrahana sy ny famoizam-po atrehin'ny olona any an-toerana.